PresseBoard - ပေါ်တယ်ကိုနှိပ်ပါ။
5 ။ ဇူလိုင်လ 2022
စျေးနှုန်းနှိုင်းယှဉ်မှု- အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းကို ရှာပါ။
သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်များ၊ သတင်းနှင့် ကြေငြာချက်များ အတွက် စာနယ်ဇင်း ဒေတာဘေ့စ်
ဆေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ကျန်းမာရေး
ဦးနှောက်အကျိတ်- Cologne / Bonn ဧရိယာရှိ meningioma ကုထုံး
၏ pr တံခါးပေါက်4။ ဇူလိုင်လ 2022 0
Cologne/Bonn ဧရိယာရှိ ဦးနှောက်အကျိတ်လူနာများ- meningiomas အတွက် စံကုထုံးအဖြစ် ခွဲစိတ်မှု ဦးနှောက်အကျိတ်ကုသမှုကို လူနာတစ်ဦးချင်းစီအလိုက် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားသည်။ COLOGNE/BONN Meningioma သည် ဆဲလ်များမှ ပေါက်ဖွားလာသော ဦးနှောက်အကျိတ်ဖြစ်သည်။
Neuss အတွက် မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်- macular degeneration အတွက် လေဆာ ကုသမှု။
Macular degeneration အတွက် လေဆာကုထုံးဆိုင်ရာ လေ့လာမှု နည်းပါးနေသေးသော်လည်း၊ Neuss အတွက် မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်က AMD အတွက် လေဆာကုထုံးဆိုင်ရာ လေ့လာမှုများ နည်းပါးနေကြောင်း Neuss မှ မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်က သတိပေးသည်။ သတင်း အခုထိရှိနေပြီ...
Kiss Day- အနံ့အသက်ဆိုးသည် အနံ့အသက်သက်သက်လား သို့မဟုတ် ရောဂါဗေဒအရလား။
ဒီနေ့နမ်းပြီးပြီလား။ မဟုတ်ဘူးလား? ၆.၇. အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အနမ်းနေ့။ တကယ်ကို ကောင်းတဲ့ပွဲပါ။ တစ်ယောက်ယောက်က ခံတွင်းနံ့မကောင်းရင်။ ခံတွင်းနံ့တွေ ဆက်တိုက်ထွက်နေရင်...
data4doc ဖြင့် အီး-ဆေးစာအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ-
နေထိုင်သူဆရာဝန်များအတွက် KBV နှင့် gematik အသိအမှတ်ပြုထားသော ဆေးစာဆော့ဖ်ဝဲ Langen၊ ဇူလိုင်4ရက်၊ 2022- Vidal MMI Germany GmbH (Vidal MMI) မှ ဆေးညွှန်းဆော့ဖ်ဝဲ "data4doc" တွင် KBV နှင့် gematik လက်မှတ်များပါရှိသည်...
စီးပွားရေး၊ စီးပွားရေး၊ ငွေကြေး
အစားအသောက်ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်ခြင်းနှင့် ယူကရိန်း- ဆက်စပ်မှုမှာ အဘယ်နည်း။
ယူကရိန်းမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေက တကမ္ဘာလုံးက လူတွေကို စိတ်လှုပ်ရှားစေတယ်။ ပြည်သူတွေရဲ့ နစ်နာမှုဟာ အကျိုးစီးပွားအတွက်သာ မဟုတ်ဘဲ စစ်ပွဲရဲ့ စီးပွားရေးအပေါ် သက်ရောက်မှုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
စက်မှုရောင်စုံဆေးမင်များဖြင့် BradyJet J4000 အညွှန်းပရင်တာ
၏ PM ဖန်ဆင်းရှင်4။ ဇူလိုင်လ 2022 0
BradyJet J4000 သည် ခြစ်ရာနှင့် ညစ်ညမ်းမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသော ရောင်ခြယ်ဆေးမင်များကို အသုံးပြုသည့် အညွှန်းပရင်တာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အရည်အသွေးမြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ဓာတ်ခွဲခန်းတံဆိပ်များနှင့် lockout tagout လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အရောင်ဖြင့် ရိုက်နှိပ်နိုင်စေပါသည်။
နိုင်ငံရေး၊ ဥပဒေ၊ လူ့အဖွဲ့အစည်း
GVV ဂုဏ်ထူးဆောင် ဟင်းချို၊ ကျောင်းသုံးခွက်၊ လူနှင့် စက်ပါဝါအတွက် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆု သုံးဆု
- Rheinbach ရှိ Palotti လှူဒါန်းမှုစခန်းအတွက် အထူးဆု
- GVV Versicherungen မှ စေတနာ့ဝန်ထမ်းဆု
Looking Glass Labs သည် metaverse အတွက် လမ်းပြမြေပုံအဖြစ် နည်းပညာဆိုင်ရာ အမြင်စာတမ်းကို ထုတ်ပြန်သည်။
ကုမ္ပဏီ၏ အထင်ကရစတူဒီယိုဖြစ်သော House of Kibaa သည် စတူဒီယိုမှ ၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းပြကာ လက်ရှိပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် တီထွင်ထုတ်လုပ်မည့် ထုတ်ကုန်များကို အကြမ်းဖျင်းဖော်ပြသည့် စာမျက်နှာ ၁၀ မျက်နှာပါ လမ်းပြမြေပုံကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Neckar သို့ပြန်သွားရန်- LOT Polish လေကြောင်းလိုင်းသည် ယခုအခါ စတုဂတ်မှ ဝါဆောသို့ ထပ်မံပျံသန်းနေပြီဖြစ်သည်။
LOT Polish လေကြောင်းလိုင်းသည် ယခုအခါ စတုဂတ်မှ ဝါဆောသို့ နေ့စဉ် ပျံသန်းနေပြန်သည်။ (Image source: Stuttgart Airport) ကပ်ရောဂါကြောင့် အနှောက်အယှက်ဖြစ်ပြီးနောက် LOT Polish လေကြောင်းလိုင်းသည် နွေရာသီရာသီအတွက် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ စတုဂတ်သို့ ပြန်လည်ပျံသန်းလာခဲ့သည်။
ပရိဘောဂထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအရည်အသွေးအသင်း "ProMovers" အလုပ်စတင်သည်- ဝန်ထမ်း 50 ရှိသော အဖွဲ့ဝင်ကုမ္ပဏီ 2.000 ၏အသိုင်းအဝိုင်းအသစ်
Wiesbaden တွင် ဇန်နဝါရီလ 19 ရက်၊ 2022 ရက်နေ့တွင် အခြေခံအုတ်မြစ်ရှိ ProMovers ဘုတ်အဖွဲ့။ Flörsheim၊ ဇူလိုင်4ရက်၊ 2022 - ၎င်းကို ဇန်နဝါရီ 19 ရက်၊ 2022 တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဇူလိုင် 1 ရက်၊ 2022 တွင်၎င်း၏...
Sassy Resources သည် နာမည်ကို "Sassy Gold" သို့ပြောင်းပြီး Eskay Camp ရှိ Foremore Project ကို ပြန်လည်အာရုံစိုက်သည်
VANCOUVER၊ British Columbia၊ ဇူလိုင်လ4ရက်၊ 2022 ခုနှစ် - Sassy Resources Corporation (Sassy သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီ) (CSE: SASY, FSE: 4E7, OTCQB: SSYRF) သည် ကုမ္ပဏီမှဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသောကြောင့် အောက်ပါကော်ပိုရိတ်အပ်ဒိတ်ကို ပံ့ပိုးပေးသည့်အတွက် ဝမ်းမြောက်မိပါသည်။
မတူကွဲပြားသော ထင်မြင်ယူဆချက်များသည် အရေးကြီးသည် - သို့သော် ၎င်းတို့ကို ပုံစံဖြင့် ကိုယ်စားပြုပါ။
အထင်ကြီးလောက်စရာ ဥပမာတစ်ခုကိုသုံးပြီး Petra Lienhop က လူတွေဟာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဓာတ်ပုံမရိုက်ဘဲ တစ်စက္ကန့်ရဲ့ အပိုင်းလေးပိုင်းကို ဘယ်လို စီရင်ချက်ချသလဲဆိုတာကို ပြသပါတယ်။ Petra Lienhop သည် အလျင်စလို ခံယူချက်အကြောင်း ပြောပြပြီး သင့်အကြောင်း စဉ်းစားစေသည်...
သိပ္ပံ၊ သုတေသန၊ နည်းပညာ
Battery Show 2022- Wuxi Lead Intelligent Equipment Co., Ltd. အနာဂတ်ရဲ့ လက်သုံးဘက်ထရီနည်းပညာကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
စတုဂတ်၊ ဇူလိုင် 04၊ 2022- တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ်၊ မော်တော်ကားထုတ်လုပ်သူများ၊ ဘက်ထရီထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများနှင့် စိတ်ပါဝင်စားသူများသည် "Battery Show Europe" ဟုခေါ်သည့် နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းများအကြောင်း အချက်အလက်ဖလှယ်ရန်အတွက် စတုဂတ်တွင် တွေ့ဆုံကြသည်။
လေကြောင်းခရီးသည်အခွင့်အရေး- လေယာဉ်ထွက်ခွာချိန် အလွန်နောက်ကျပါက၊
အားလုံးက အားလပ်ရက်ကို စောင့်မျှော်နေကြပါတယ်။ မနှစ်မြို့ဖွယ် အံ့သြဖွယ်ရာများ စောင့်ကြိုနေပါက ဘာလုပ်ရမလဲ။ ဓာတ်ပုံ- HUK-COBURG နေ့စဉ်သုံး အကြံပြုချက်များ လေကြောင်းခရီးသည်အခွင့်အရေး- လေယာဉ်ထွက်ခွာချိန် နောက်ကျပါက ခရီးသည်များ ဘာအခွင့်အရေးများ ရှိမည်နည်း။ ဘယ်…
Minol ZENNER Connect သည် ဥရောပသို့သွားပါသည်။
ZENNER IoT PLUG&PLAY ဖြေရှင်းချက်များကို ဥရောပနိုင်ငံများစွာတွင် ယခုရရှိနိုင်ပြီ Internet of Things (အတိုကောက် IoT) သည် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့၊ စွမ်းအင်ပေးသွင်းသူများအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်အတွက် အရေးကြီးသော ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဓာတ်ခွဲခန်းဖော်ထုတ်ခြင်းအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဓာတ်ခွဲခန်းတံဆိပ်များ
ဓာတ်ခွဲခန်းတံဆိပ်များကို လုံး၀ အားကိုးနိုင်ရမည်။ MAKRO IDENT မှ ဓာတ်ခွဲခန်းတံဆိပ်များဖြင့်၊ ဓာတ်ခွဲနမူနာများကို ဘယ်တော့မှ ဆုံးရှုံးမည်မဟုတ်ပါ။ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာသည့်တိုင် ပုံနှိပ်စာသည် ကောင်းစွာမြင်နိုင်ဆဲဖြစ်သည်။
nesting လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များဖြင့် ယခု 4D_Additive ဆော့ဖ်ဝဲ
3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းဆော့ဖ်ဝဲလ်သည် ယခုအခါ ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး တိကျသောပုံစံများကို voxel ဖော်မတ်ဖြင့် အစားထိုးပေးသောကြောင့်၊ မြင့်မားသော အသိုက်အဝန်းအမြန်နှုန်းနှင့် ထုပ်ပိုးမှုသိပ်သည်းစများကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ (ပုံအရင်းအမြစ်- CT CoreTechnologie GmbH) ဂျာမန်-ပြင်သစ်ဆော့ဖ်ဝဲထုတ်လုပ်သူ CoreTechnologie တွင်...
nds ၏ ASP သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အပေါ် AVA မှတ်ချက်။ ဝန်ကြီး
NDS Otte-Künast၊ ဇူလိုင်လ 02.07.2022 ရက်၊ XNUMX ASP မှ စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီး၏ ASP ၏ ASP သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ASP သည် "... ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ Lower Saxony တွင် ဝက်အဖျားမကျရောက်မီ အချိန်အနည်းငယ်သာရှိသေး၏။ .။
ပညာရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ လေ့ကျင့်ရေး
Johanna Dahm မှ Noah's Ark Principle
Johanna Dahm သည် သူ၏အဖွဲ့နှင့်အတူ သွက်လက်သွက်လက်သောအသင်းများကို အောင်မြင်စွာ ဦးဆောင်နိုင်သည် (Image source: Andreas Bender) Noah's Ark - အလတ်စား ကုမ္ပဏီများတွင်ဖြစ်စေ အဖွဲ့လိုက်ဖြစ်စေ ၊ တွင်ဖြစ်စေ အောင်မြင်စွာ ဦးဆောင်နိုင်စေသော နိယာမဖြစ်သည်။
နှစ်စဉ် ခွင့်ရက်အပြင် ကျွမ်းကျင်သင်တန်း ပြီးအောင်ပါ။
ဘာလင်၊ ဇူလိုင် 04.07.2022 ရက်၊ XNUMX တွင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပညာရေး ခွင့်လွတ်ခွင့်ဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသူများသည် ၎င်းတို့၏ နှစ်စဉ်ခွင့်ရက်တစ်ရက်ကို သုံးစရာမလိုဘဲ ၎င်းတို့၏ NLP နောက်ထပ်သင်တန်းကို သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဖောက်သည်ခေါ်ဆိုမှုစနစ်များက စောင့်ဆိုင်းချိန်ကို လျှော့ချပေးသည်။
digitalSIGNAGE.de ​​​​KAS ကို ပြီးပြည့်စုံသော ဖြေရှင်းချက်အဖြစ် ပေးသည်။
creditweb သည် 8 ကြိမ်မြောက်အတွက်အကောင်းဆုံးဆောက်လုပ်ရေးဘဏ္ဍာရေးပွဲစားဖြစ်ခဲ့သည်။
eKomi & BankingCheck Award 2022 - creditweb သည် ရှစ်ကြိမ်မြောက်ဆက်တိုက် "အကောင်းဆုံးချေးငွေထုတ်ချေးခြင်း" နှင့် "အကောင်းဆုံးပွဲစားချေးငွေ" အမျိုးအစားများတွင် ပထမနေရာရရှိသည်
အိုင်တီ၊ မီဒီယာအသစ်၊ ဆော့ဖ်ဝဲ
ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုက သိသိသာသာ တိုးလာနေပါတယ်။
လုံခြုံရေးကျွမ်းကျင်သူများသည် တိုကင်ယူခြင်းကို အသုံးပြု၍ ကုဒ်ဝှက်ခြင်းအပေါ် မှီခိုနေရသည့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အထူးကျွမ်းကျင်သူ၏ CEO ဖြစ်သူ Michael Deissner က "လုပ်ဆောင်ရန် အချိန်တန်ပြီ!" (Wiesbaden၊ ဇူလိုင်လ 2022) တွင် တစ်ရက်မျှ မကုန်ဆုံးသေးပါ။
မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသော "Bernd" သည်လည်း GVV Versicherungen ၏ရလဒ်ကိုဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေသည်။
CEO Wolfgang Schwade မှ နိဂုံးချုပ် - "2021 ဘဏ္ဍရေးနှစ်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည် အခက်အခဲများကြားမှ ကောင်းမွန်သောအာမခံချက်ရှိခြင်း၏ ခံစားချက်ကို ခံစားနိုင်သည်"
Interstitial cystitis နှင့် တင်ပါးဆုံတွင်းနာကျင်ခြင်း - မျှော်လင့်ချက်မဲ့အခြေအနေမဟုတ်ပါ။
ဇူလိုင်လ 20 ရက်၊ 2022 တွင် အွန်လိုင်းသတင်းအချက်အလက်ဖြစ်ရပ်
ဥယျာဉ်၊ အဆောက်အဦး၊ နေထိုင်ခြင်း။
Temm Haustechnik သည် အလတ်စားကုမ္ပဏီများအတွက် Grand Prix ၏နောက်ဆုံးအကျော့သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။
“ကမ္ဘာသစ်ဆီသို့” သည် Oskar Patzelt Foundation 2022 ၏ အရေးကြီးသော စီးပွားရေးဆု၏ နှစ်စဉ်ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ Temm Haustechnik သည် ပထမအကြိမ် နောက်ဆုံးအဆင့်သို့ အရည်အချင်းပြည့်မီသည်။ သူ့အဖွဲ့နဲ့ အတူတူ Oliver Temm က ဒါကို ပျော်ပါတယ်...
Cranston Immobilien - Offenbach နှင့် အနီးတစ်ဝိုက်ရှိ အိမ်ခြံမြေအရောင်းအတွက် ပါတနာ
Offenbach၊ ဇူလိုင် 04.07.2022 ရက်၊ XNUMX အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်သည် အမြဲတမ်းရွေ့လျားနေပြီး မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ဈေးနှုန်းများ ဆက်တိုက်မြင့်တက်ခဲ့သည်။ သင့်အိမ်ခြံမြေကို အခုပဲရောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သင့်မှာ စျေးနှုန်းကြီးမြင့်ဖို့ အခွင့်အလမ်းကောင်းရှိပါတယ်...
စွမ်းအင်ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုအတွက် ထောက်ပံ့ငွေများ - ERGO Rechtsschutz Leistungs-GmbH မှ စားသုံးသူအချက်အလက်
အိမ်ပိုင်ရှင်များသည် ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် ငွေကြေးပံ့ပိုးမှုရနိုင်သည့်အခါ ဥပမာ၊ အိမ်ပိုင်ရှင်များသည် photovoltaic စနစ်များအတွက် KfW ထောက်ပံ့ကြေးကို လျှောက်ထားနိုင်သည်။ (Image source: ERGO Group) အားကောင်းသော ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း သို့မဟုတ် ခေတ်မီခြင်းတို့သည် အိမ်တစ်လုံးကို ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပိုမိုသဟဇာတဖြစ်စေသော်လည်း ၎င်းသည်...
တိုးတက်မှုအတွက် သင်တန်းတွင်- Q-Energy သည် Bramstedt လေအားတိုးခြံကို ရယူခဲ့သည်။
LUX* South Ari Atoll သည် ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ဆိုလာသင်္ဘောကို ကြိုဆိုပါသည်။
၎င်း၏ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအစပျိုးမှုများကြောင့်လူသိများသောအပန်းဖြေစခန်းသည် Blue Odyssey ကမ္ဘာလှည့်ပတ်သွားလာမှု၏အဓိကမိတ်ဖက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးဆိုလာသင်္ဘောသည် LUX* South Ari Atoll တွင်မကြာမီဆိုက်ကပ်တော့မည် (ပုံအရင်းအမြစ်- © The Lux Collective…
၏ felixweber ၂4။ ဇူလိုင်လ 20224။ ဇူလိုင်လ 2022 0
ဂျာမန်စကားပြောလူဦးရေသည် ကမ္ဘာ့အရေးအကြီးဆုံး ဖန်တီးမှုများတွင် သိပ္ပံနှင့်အနုပညာတွင် ပါဝင်နေပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ လေ့လာမှုနယ်ပယ်တိုင်းနီးပါးတွင် ဂျာမနီနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ရှည်လျားပြီး ခံနိုင်ရည်ရှိသော မှတ်တမ်းတစ်ခုရှိသည်။ ဂျာမနီမှာ...
ရန်ပုံငွေရှာတဲ့အလုပ်တွေက နေ့စဉ်ဘ၀ကို ကြွယ်ဝစေပါတယ်။
service94 GmbH တွင် လိုက်လျောညီထွေရှိသော အလုပ်ပုံစံများ ဝန်ဆောင်မှု94 GmbH မှ အချက်အလက်တစ်ခု ရပ်တည်ချက် လက်ရှိစစ်တမ်းများနှင့် ကျွမ်းကျင်သူများ၏ ထင်မြင်ယူဆချက်များအရ၊ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း အကျပ်အတည်းများသည် အလုပ်လောကတွင် ထားရှိလိုသည့် တောင်းဆိုချက်များကို ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ ဒီလိုနဲ့ မတ်တပ်ရပ်...
မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသော "Bern" ရလဒ်ကိုဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေသည်။
GVV Versicherungen ၏ နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာကို အထွေထွေအစည်းဝေးတွင် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် ၎င်း၏အကျိုးဆက်များကို မနှစ်က မုန်တိုင်း "Bernd" ကြောင့် ရှင်းလင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
Christoph Kugelmann သည် Etengo AG ၏ Chief Operating Officer (COO) ဖြစ်လာသည်။
Etengo AG Mannheim ၏ COO ဖြစ်သူ Christoph Kugelmann၊ ဇူလိုင် 04.07.2022 ရက်၊ 01 ခုနှစ် – ဇူလိုင်လ 2022st၊ XNUMX မှစတင်ပြီး ကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့မှ Christoph Kugelmann ကို Etengo AG ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့သို့ ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ သူ့ရဲ့သရုပ်ဆောင်မှုမှာ...
GVV ဂုဏ်ထူးဆောင်ရုံးသုံးဆု၊ ဟင်းချို၊ ကျောင်းသုံးခွက်၊ လူနှင့် စက်ပါဝါ - Palotti လှူဒါန်းမှုစခန်း Rheinbach အတွက် အထူးဆု၊
Volunteer Award "We're all in one boat" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆုချီးမြှင့်ခြင်း အခမ်းအနား "We're all in one boat" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် GVV အာမခံကုမ္ပဏီများမှ "စည်ပင်" နှင့် "တိုက်ရိုက်" တို့ကို လိုချင်ပါသည်...
12... 5.398 လာမယ့်
မိသားစု၊ သားသမီး၊ အိမ်
ဖက်ရှင်၊ ခေတ်ရေစီးကြောင်းများ၊ လူနေမှုပုံစံများ
ကြော်ငြာခြင်း၊ စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ အတိုင်ပင်ခံ၊ စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း။
ရှယ်ယာများ (15616) စတော့ဈေး (14779) စတော့ဈေးကွက် (14785) ရှေ့နေ (1719) ရှေ့နေများ (1508) အာရဂ် (1941) ဘာလင် (2822) လဲလှယ် (15100) စတော့ဈေးကွက်သတင်း (14778) မိုဃ်းတိမ်ကို (1341) Corona (1556) ဒစ်ဂျစ်တယ် (3143) အဖိုးတန်သတ္တုများ (1456) အက်ဆင်း (1088) ငွေကြေး (14784) ဘဏ္ဍာရေး (15635) gel (4253) Geld (15156) ကျန်းမာခြင်း (2024) ရှေ (3196) ဟမ်းဘတ် (1205) အိမ်ခြံမြေ (1506) IT (1189) ကလေးများ (1239) Liebe (1191) စျေးကွက်ရှာဖွေရေး (1523) Mittelstand (1074) မြူးနစ် (1098) ရေရှည်တည်တံ့မှု (1647) သတင်း (14759) သတင်း Current (9541) သတင်း Current (14650) ရှေ့နေ (2488) ရှေ့နေများ (1564) ခရီးသွား (1080) လုံခွုံရေး (1543) ငှေ (2161) Software များ (1704) ပြုပါ (1584) အားလပ်ရက်များ (1577) အာမခံ (1978) နောက်ထပ်ပညာရေး (1172) စီးပွားရေးကို (6483) စီးပွားရေးသတင်း (5019) သွားဆရာဝန် (1149)
သင့်သတင်းနှင့် ကြေငြာချက်များကို အများသူငှာ ပြုလုပ်ပါ။ အင်တာနက်ပေါ်တွင် ပိုမိုရောက်ရှိနိုင်စေရန်နှင့် သုံးစွဲသူများနှင့် မီဒီယာအဆက်အသွယ်များကို အချိန်တိုအတွင်း ပိုမိုရောက်ရှိစေရန် အွန်လိုင်း PR မီဒီယာအသစ်ကို အသုံးပြုပါ။ PR-Gateway ဖြင့် သင့်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များကို ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် မတူညီသော စာနယ်ဇင်းပေါ်တယ်များ၊ သတင်းဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာများစွာမှတစ်ဆင့် လျင်မြန်လွယ်ကူစွာ ဖြန့်ဝေနိုင်ပါသည်။ PR-Gateway ကို ၁၄ ရက် အခမဲ့ စမ်းသပ်ပါ။
မူပိုင်ခွင့်© 2022 PresseBoard - ပေါ်တယ်ကိုနှိပ်ပါ။.